ကျောင်းများနှင့် ဆရာများ | /// stage /// – အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရန် နည်းလမ်းသစ်
/// stage /// – အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရန် နည်းလမ်းသစ်
သင်၏ အင်္ဂလိပ်ကို မြှင့်တင်ပါ
ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ ဂိမ်းများ၊ သတင်းများ၊ မိတ်ဆွေများ
ဝင်ရောက်ပါ သို့မဟုတ် သင်၏ အကောင့် ပြုလုပ်ပါ။
အကောင့်ရှိပြီးပြီလား? ခုပဲ ဝင်ရောက်လိုက်ပါ!
အသုံးပြုသူအမည် သို့မဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ: *
သင်၏ အသုံးပြုသူအမည် သို့မဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာကို သုံး၍ ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။
သင့်တွင် ပရိုမို ကုဒ် ရှိပါသလား။ ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။
✖ သင်၏ ပရိုမို ကုဒ်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
ပညာရေးအတွက် English Attack!
ကျောင်းများ၊ တက္ကသိုလ်များ၊ ဘာသာစကားသင်ကျောင်းများ
English Attack! သင်ယူမှုယူနစ်များဖြစ်သည့် ဗီဒီယိုလေ့ကျင့်ခန်းများ၊ ပုံပြအဘိဓါန်များ နှင့် လေ့ကျင့်ရေးဂိမ်းများကို သင့်စာသင်သားများဖြင့် စာသင်ခန်းတွင်းဖြစ်စေ စာသင်ခန်းပြင်ပဖြစ်စေ လေ့ကျင့်နိုင်ပါသည်။
English Attack! ရှိ စုံလင်သော ခေါင်းစဉ်များနှင့် ခက်ခဲမှု အဆင့်များသည် အလယ်တန်းအဆင့်ကျောင်းသားများမှသည် အထက်တန်းနှင့် တက္ကသိုလ်အဆင့်ကျောင်းသားများ၊ ပြင်ပ ဘာသာစကားသင်တန်းကျောင်းများရှိ ကျောင်းသားများ အတွက် မရှိမဖြစ် အကောင်းဆုံး အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရေး အဖော်ဖြစ်ပါသည်။
နက်နဲပြီး အဆက်မပြတ် အသစ်အသစ်လေ့ကျင့်ခန်းများထည့်သွင်းပေးနေပြီး သင်ယူသူများသည် မိမိပညာသင်ယူမှုတစ်လျှောက်တွင် အင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည်ကို တိုးတက်စေပါသည်။ ယူနစ်များ၏ အမျိုးအစားနှင့် စနစ်များ (ရုပ်ရှင်၊ သတင်း၊ ဂီတအစရှိသည်တို့မှ ဖြတ်ပိုင်းများ)သည် စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လိုစိတ်ကို နှိုးဆွပေးပါသည်။
ပညာရေးအတွက် English Attack! တွင် ဆရာများနှင့် ကျောင်းများအတွက် အမျိုးအစားနှင့် အထူးပညာရေး ဈေးနှုန်းပလန်များ ပါဝင်ပါသည်။
English Attack! ကို ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ ကျောင်းများ၊ တက္ကသိုလ်များနှင့် ဘာသာစကားသင်တန်းကျောင်းများတွင် အသုံးပြုလျက် ရှိပါသည်။
English Attack! ရင်းမြစ်များကို သင့် သင်တန်းသားများနှင့် အသုံးပြုခြင်း
သင့်စာသင်သားများကို သင်ရွေးချယ်ထားသည့် သင်ခန်းစာအတွက် ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခိုင်းပါ
သင် သင်ကြားလိုသောအကြောင်းအရာအလိုက် သင့်သင်တန်းသားများသည် Video Booster (ဗီဒိယို လေ့ကျင့်ခန်း)များဖြင့် အသင့်ပြင်နိုင်ပါသည်။ သင်ခန်းစာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝေါဟာရပါဝင်သည့် Photo Vocab (ပုံပြအဘိဓါန်) ကို ပြန်ကြည့်ရန်လည်း ခိုင်းနိုင်ပါသည်။
သင့်လျော်ရာ English Attack! သင်ယူမှုယူနစ်များဖြင့် ကြိုတင်အသင့်ပြင်ထားခြင်းဖြင့် သင်ယူသူများသည် ပို၍စိတ်ပါဝင်စားရှိပြီး စာနှင့် ပိုရင်းနှီးမှုရှိလာသည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Video Boosters များအကြောင်း ထပ်မံသိရှိနိုင်ရန်
Photo Vocabs များအကြောင်း ထပ်မံသိရှိနိုင်ရန်
သင်ခန်းစာ ပြင်ဆင်မှု (အိမ်စာ)
English Attack! ကို စာသင်ခန်းတွင်းတွင် အသုံးပြုခြင်း
စာသင်ခန်းတွင်းတွင် အပြန်အလှန်ထိတွေ့သင်ကြားနိုင်သော ရင်းမြစ်များသည် သင့် တပည့်များ၏ အာရုံစိုက်မှုကို ရရှိရန် အလွန်ကောင်းမွန်သော နည်းလမ်းများ ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင့်စာသင်ခန်းတွင် ပရိုဂျက်တာ သို့မဟုတ် အပြန်အလှန်ဆက်ဆံနိုင်သော ဝှိုက်ဘုတ်ရှိခဲ့လျှင် Video Booster ကို တပည့်များအား တိုက်ရိုက်ဖွင့်ပြခြင်းဖြင့် ၄င်းတို့ထံမှ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကို ပိုမိုရရှိစေနိုင်ပါသည်။ လေ့ကျင့်ခန်း၏ ဗီဒီယိုအပိုင်းကို မျက်နှာပြင်အပြည့်လည်း ဖွင့်ပြနိုင်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းကို နောက်မှပြန်လာနိုင်ပါသည်။ အချို့ ဝေါဟာရ သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာများကို စာသင်ခန်းတွင်း လေ့ကျင့်ရာတွင် Photo Vocabs သည် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ သင့်စာသင်သားများနှင့် အတူ Photo Vocab ကိုအဖွဲ့လိုက် လေ့ကျင့်ခြင်းသည် ထိုပုံပြအဘိဓါန်ခေါင်းစဉ်ကို ကောင်းမွန်စွာ ဆွေးနွေးစေနိုင်ပါသည်။
သင်ခန်းစာတစ်ခု ပို့ချခြင်း (စာသင်ခန်းသုံး)
လေ့ကျင့်ရေးဂိမ်းများဖြင့် ဘာသာစကားဆိုင်ရာအသစ်များကို တစ်ပေါင်းတစည်းတည်း မှတ်သားပါ။
သင်ခန်းစာ အပြီးတိုင်းတွင် သင့်စာသင်သားများ စာသင်ခန်းထဲတွင်တွေ့ခဲ့သည့် ဘာသာစကားဆိုင်ရာအသစ်များကို လေ့ကျင့်ပေးခြင်းဖြင့် တစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်း မှတ်သားနိုင်ပါသည်။
English Attack! လေ့ကျင့်ရေးဂိမ်းများသည် Photo Vocabs နှင့် Video Boosters တွင်တွေ့ခဲ့ပြီးသော အကြောင်းအရာအလိုက် ပြန်လှန်လေ့ကျင့်ခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်စေပြီး ၄င်းတို့သည် လတ်ကလောလေ့လာပြီး အကြောင်းအရာများအပေါ် မှတ်သားရာတွင် အထူး ထိရောက်မှုရှိပါသည်။
အိမ်စာဟု မခံစားရစေပဲ ဤဂိမ်းများသည် အကြောင်းအရာ၊ ထပ်တလဲလဲလုပ်ဆောင်မှု နှင့် ပုံ/စာ တစ်ပေါင်းတည်း လေ့လာရမှုသည် ရေတိုမှတ်ဥာဏ်မှသည် ရေရှည်မှတ်ဥာဏ်သို့ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
English Attack! ကို စာသင်ခန်းတွင် အသုံးပြုရာ၌ အကြံပေးချက်အချို့ဖြစ်ပါသည်။ English Attack! ကို သင့်သင်ကြားမှုပုံစံနှင့် သင်ရိုးအလိုက် ပေါင်းစပ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။
English Attack! သည် အွန်လိုင်းအလုပ်ရုံများတပ်ဆင်ထားသည့် ဘာသာစကားလေ့လာရေးဌာနများအတွက်လည်း ထိရောက်သည့် ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
သင့်စာသင်ခန်းကို ဆရာအကောင့်ဖြင့် ခန့်ခွဲလိုက်ပါ
သင့် ဆရာအကောင့်သည် English Attack! သင်ယူမှုယူနစ်များအားလုံးကို အကန့်အသတ်မရှိသုံးစွဲနိုင်စေယုံသာမက English Attack! ရှိသင့်သင်တန်းသားများ၏ အလုပ်များကိုလည်း ခန့်ခွဲနိုင်ပါသည်။
သင်၏ တစ်မူထူးခြားသည့် ဖိတ်ခေါ်မှုကုဒ်၏ ကျေးဇူးကြောင့် သင့်သင်တန်းသားများသည် English Attack! တွင် သင့်ကို ဆရာအဖြစ် ဆက်သွယ်နိုင်ကြပါပြီ။ သင်နှစ်သက်သလောက် အွန်လိုင်းသင်တန်းများဖန်တီးနိုင်ပြီး သင့်တပည့်များကို သင်တန်းတစ်ခုသို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုပြီး အပ်နှံပေးနိုင်ပါသည်။
သင်ယူမှုယူနစ်တစ်ခုချင်းစီ(Video Booster နှင့် Photo Vocabs)အပေါ်တွင် ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် ထိုယူနစ်ကို သင်ဖန်တီးထားသည့် သင်တန်းများ၏ အဆိုင်းမင့်များအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်စေပါသည်။
သင့် သင်တန်းသားတိုင်းသည် ဆိုက်တွင် "ကျွန်ုပ်၏ ကျောင်း" စာမျက်နှာကို ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းတွင် သင်သတ်မှတ်ပေးထားသော အဆိုင်းမင့်များကို တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အတန်းတိုင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရန်အတွက်လည်း တစ်ဥိးချင်းသို့မဟုတ် တစ်တန်းလုံးနှင့် စာတိုပို့နိုင်ပါသေးသည်။
လုပ်ရှားမှုများ ဒတ်ရ်ှဘုတ်သည် သင့်ကို သင်တန်းသား၏ ဆိုက်အသုံးပြုမှု အကြိမ်ရေ၊ အဆိုင်းမင့် လိုက်နာပြီးစီးမှု နှင့် အဆိုင်းမင့်တစ်ခုချင်းစီ ရမှတ်များကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်စေပါသည်။
သင်သည် ဆရာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သင့် သင်တန်းသားများနှင့်အတူ English Attack! ကို သုံးစွဲလိုပါသလား? ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
သင့်ကျောင်းအတွက် English Attack! လိုင်စင်ရယူခြင်း
English Attack! ကို သင့်ကျောင်းအတွက် သုံးစွဲရန် လွယ်ကူပါသည်။ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာသော ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် သုံးစွဲနေပြီးဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျောင်းများ အမျိုးအစားသည် ဆိုက်ပေါင်းစုံ ဖန်တီးနိုင်ရန်၊ ဆရာများနှင့် တပည့်များအတွက် အလိုအလျောက် အကောင့်ဖန်တီးပေးမှု နှင့် စာသင်သားများကို စာသင်ခန်းနှင့် အလိုအလျောက် သတ်မှတ်ပေးခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။
သင့်တပည့်များ၏ အသုံးပြုမှု အချက်အလက်များကိုလည်း သင့်အဖွဲ့အစည်းတွင်းတွင် လက်ရှိသုံးစွဲနေသည့်အတိုင်း ရရှိနိုင်ပါသည်။
ကျွနုပ်တို့၏ လိုင်စင်များသည် သင့်စာသင်နှစ်အလိုက် ပြောင်းလဲရယူနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးထက်ပိုသော အသုံးပြုသူများ ဆရာများနှင့် သင်ယူသူများ အတွက်လည်း အထူးလက်ကားလျှော့ဈေးများ ရရှိနိုင်ပါသည်။
သင်သည် ကျောင်းပိုင်ရှင်တစ်ယောက် သို့မဟုတ် ကျောင်းမန်နေဂျာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး English Attack! တစ်ဦးထက်ပိုသော အသုံးပြုသူ လိုင်စင်များအကြောင်း သိလိုပါသလား? ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပါ။
English Attack! သည် အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာနိုင်ဖို့အတွက် မီဒီယာ နှင့် ဗီဒီယို ဂိမ်း ကျွမ်းကျင်သူများက သုတေသနပညာရှင်များနှင့် အတူတကွ သိမြင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော ဦးဏှောက်ဖွဲ့စည်းပုံသိပ္ပံပညာအရ တည်ထောင်ထားသော လုံးဝ ဆန်းသစ်သည့် နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ပ်တို့၏ သူမတူ လေ့လာမှုလမ်းစဉ်သည် နေ့စဉ် အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာနိုင်ရန် ဗီဒီယိုများ၊ ပုံများ၊ ဂိမ်းများ နှင့် လူမှုရေး ကွန်ရက်များကိုပေါင်းစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
ပျော်စရာကောင်းပြီး ထိရောက်ပါသည်။ သင်စမ်းကြည့်ပြီးသောအချိန်တွင် အခြားပုံစံနည်းလမ်းနှင့် ဘယ်လိုမှလေ့လာချင်တော့မည်မ ဟုတ်ပါ။
ကိုယ်ပိုင် လုံခြုံစေမှု မူများ
English Attack! နှင့် လေ့လာခြင်း ကုမ္ပဏီများ ကျောင်းများနှင့် ဆရာများ တသီးပုဂ္ဂလ ဆရာများ
ကျွန်ုပ်တို့ ၏ နောက်ဆုံးထွက် ပုံနှိပ်Media
လုပ်ပိုင်နိုင်ခွင့် ကွန်ယက် စပ်တူလုပ်ငန်း